Easy ụzọ Nyefee Photos si LG ekwentị na kọmputa .
The LG ekwentị, dị ka LG G2, na-ahapụ gị na-enwe foto ụtọ. Ọ bụrụ na ị na-amasị agbapụ photos na LG ekwentị, nwere ike ị chọrọ iṅomi photos na kọmputa. Ọfọn, ebufe foto site na LG ekwentị na kọmputa abụghị ike ọrụ. Na akụkụ n'okpuru, m depụta 2 mfe ụzọ, ị nwere ike iṅomi ya ma na-achọta gị chọrọ ụzọ.
Ngwọta 1: Nyefee foto ndị si LG ekwentị compute mfe na eriri USB
Ọ dị mfe. Niile ị chọrọ bụ eriri USB.
Firstly, nkwụnye ke gam akporo eriri USB jikọọ gị LG ekwentị na kọmputa. Kọmputa ga-ntabi ịchọpụta gị LG ekwentị.
Mgbe ahụ, na-aga My Computer na-emeghe LG mbanye. Dị ka ị na-ahụ, na foto na ị gbaa na-echekwa na DCIM nchekwa.
Na, na, na-emeghe a nchekwa na ikpuru na dobe ọkacha mmasị gị photos na kọmputa.
Ụda mfe, nri? Otú ọ dị, i nwere ike eleghara eziokwu ahụ na-emekarị n'ebe na-ọzọ foto na gị LG ekwentị, e wezụga ndị ị gbaa. Foto ndị a na-emekarị ihe na-akpọ ngwa ma ọ bụ na-enyocha internet na gị LG ekwentị, nke na-adị mfe anya. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị ghọta ha, ọ bụghị ihe dị mfe ịchọta ha, na-atụle ọtụtụ nchekwa na gị LG ekwentị. N'ihi ya, kwere omume ịchọta ma detuo foto ndị a na kọmputa dị mfe dị ka ndị ị gbaa?
N'ezie. Ebe a bụ ụzọ dị mfe ị pụrụ ịgbaso. Otú ọ dị, gị mkpa a enyemaka. Nke ahụ bụ Wondershare MobileGo for Android (Windows) ma ọ bụ Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac). Ngwá ọrụ a na-ahuta ka a dị ike na desktọọpụ Android njikwa, nke ike iṅomi foto niile na gị LG ekwentị na akpali ha ka ha na kọmputa na batches.
Ngwọta 2: Download foto site na LG ekwentị na kọmputa na a ngwá ọrụ
Dị nnọọ download na wụnye Windows ma ọ bụ Mac version na kọmputa gị. Ebe ọ bụ na ma nsụgharị na-arụ ọrụ a yiri nnọọ ụzọ, ebe a, m na-aga na-egosi gị mfe nzọụkwụ mere na Windows version.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ LG ekwentị na kọmputa
Na-agba ọsọ MobileGo for Android omume na kọmputa. N'ihi na Windows njirimara, ị nwere ụzọ abụọ nke ejikọta. Na otu onye bụ nkwụnye ahụ nta njedebe nke eriri USB n'ime LG ekwentị na nkwụnye na nsọtụ ọzọ n'ime kọmputa. Ndị ọzọ ụzọ bụ site WiFi. Tupu WiFi njikọ, ị kwesịrị iji wụnye MobileGo ngwa faịlụ na gị LG ekwentị mbụ. Mgbe ahụ, gị LG ekwentị na-egosi na isi window.
Cheta na: N'ihi na Mac ọrụ, ị nwere ike plọg n'ime eriri USB jikọọ gị LG ekwentị gaa na Mac. WiFi a adịghị na Mac OS.
Nzọụkwụ 2. Copy foto site na LG na kọmputa
Na-ekpe sidebar, pịa triangle esote Photos. N'okpuru Photo Atiya niile bụ foto nchekwa na gị LG ekwentị. Emeghe otu nchekwa ma họrọ foto na ị ga-amasị mbupụ. Mgbe ahụ, pịa Export. Na-agagharị na kọmputa na ịtọ ebe. Mgbe ahụ, foto transfer amalite. Mgbe ọ bụ n'elu, pịa Nso ma ọ bụ Open nchekwa na-elele exported photos.
The video nkuzi na-agwa gị otú ị ịkwaga LG photos na kọmputa
N'elu bụ ụzọ abụọ na otú nyefee foto site na LG ekwentị na kọmputa. Họrọ ụzọ na-amasị gị na-enwe a-agbalị.
> Resource> Android> Easy ụzọ Nyefee Photos si LG ekwentị na kọmputa